တပ်မတော် (လေ) ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တတိယလေးလပတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း Related information payday loans 50 up to
ပင်မနေရာ မူဝါဒ/ဥပဒေ တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တပ်မတော် (လေ) ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တတိယလေးလပတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ပင်မနေရာ ကလောင်ရှင် အထူးသတင်း ကြားဖြတ်သတင်း မူဝါဒ/ဥပဒေဥပဒေ မူဝါဒ အမိန့် ကြေညာချက် သုတေသန တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး VOA အသံလွှင့်ချက် DVB အသံလွှင့်ချက် စစ်ရာဇ၀တ်မှု စစ်အင်အားဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်း သင်္ခါရတရားနှင့်စစ်အာဏာရှင် စစ်အာဏာရှင်ကြီး၏အတွင်းရေး စစ်အင်အား ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံများ စစ်ယာဉ်များ အထူးကဏ္ဍကလေးစစ်သား စစ်သားအခွင့်အရေး အဂတိလိုက်စားမှု ပြည်တွင်းသင်တန်း ပြည်ပသင်တန်း သွေးစကားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တွေ့ တိုက်ပွဲ တပ်တွင်းဆင်းရဲကျပ်တည်းမှု အိတ်ဖွင့်ပေးစာ Skip to content
ပင်မနေရာ မူဝါဒ/ဥပဒေ တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တပ်မတော် (လေ) ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တတိယလေးလပတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း တပ်မတော် (လေ) ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တတိယလေးလပတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း Friday, 27 July 2012 13:02	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး User Rating: / 2
PoorBest ??????? ????????
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၁ ရက် ၁၂း၃၀ နာရီတွင် မင်္ဂလာဒုံလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသော တပ်မတော်(လေ)၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တတိယလေးလပတ် စစ်ဆင်ရေး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ပေးပို့သူ - ဗိုလ်မှူးရန်နောင် (ပြည်တွင်းမှ လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဆဲ လေတပ် အရာရှိ တစ်ဦး)
၁။ အောက်ဖော်ပြပါ အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြပါသည် -
သိန်းနိုင် လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး၊ မင်္ဂလာဒုံလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်
ဗိုလ်မှူးချုပ် ဌေးအောင် လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး၊ မကွေးလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်
ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇင်ယော် လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှူး၊ ပုသိမ်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်
စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး (လေ) စစ်ဆင်ရေး/ တာဝန်
စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း) လေ့ကျင့်ရေးနှင့်စီမံရေး
စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း) တာဝန် အဖွဲ့ဝင်
ခေတ္တ စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း) စက်မှုလက်မှု
တပ်မှူး၊ အမှတ် (၁) လေယာဉ်မောင်းသင်ကျောင်း
တပ်မှူး၊ အမှတ် (၂) လေယာဉ်မောင်းသင်ကျောင်း
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၇၁) ရေဒါအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၇၄) ရေဒါအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၇၃) ရေဒါအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၁) ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၆) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၇) ရဟတ်ယာဉ်အုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၃၄) ဗုံးကြဲလေယာဉ်အုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၃၆) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၃၇) ရဟတ်ယာဉ်အုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၄၁) ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၄၅) ကင်းထောက်လေယာဉ်အုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၄၇) ရဟတ်ယာဉ်အုပ် အဖွဲ့ဝင်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၆၁) ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၆၃) တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၆၄) ဗုံးကြဲလေယာဉ်အုပ် အဖွဲ့ဝင်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၆၆) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၉၂) တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၉၅) ကင်းထောက်လေယာဉ်အုပ်
အုပ်မှူး၊ အမှတ် (၉၈) ဗုံးကြဲလေယာဉ်အုပ်
ယာယီအုပ်မှူး၊ အမှတ် (၂၅) ကင်းထောက်လေယာဉ်အုပ်
ယာယီအုပ်မှူး၊ အမှတ် (၅၅) ကင်းထောက်လေယာဉ်အုပ်
ယာယီအုပ်မှူး၊ အမှတ် (၄၂) တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်
ယာယီအုပ်မှူး၊ အမှတ်(၅၆)၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအုပ်
ယာယီအုပ်မှူး၊ အမှတ် (၈၇) ရဟတ်ယာဉ်အုပ်
စစ်ဦးစီးမှူး (ဒုတိယတန်း) တာာဝန်-၃
၂။ အောက်ဖော်ပြပါ အရာရှိကြီးများ တာဝန်အရ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်၍ ခွင့်ပန်ကြားခဲ့ပါသည်-
၃။ တပ်မတော် (လေ) ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တတိယလေးလပတ်အတွင်း စစ်ဆင်ရေး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ညှိနှိုင်းသုံးသပ်ရန်နှင့် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ပထမလေးလပတ်အတွင်း ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့် စစ်ဆင်ရေး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ စီမံချက်ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
၄။ သဘာပတိ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် လေးလပတ်ကို ပုံမှန်အတိုင်း မလုပ်ဖြစ်သည်မှာ ကြာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းလေးလပတ်များတွင်လည်း အခြေအနေအရ အုပ်မှူးများကို မခေါ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအစည်းအဝေးတွင် သိသင့်သိထိုက်သည်များကို သိစေချင်ပြီး ပြောချင်သည်များလည်းရှိ၍ အစည်းအဝေးသို့ အုပ်မှူးများတက်ရောက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွင့်အနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစည်းအဝေး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) လေးလပတ်နှင့် တပ်မတော်စည်းရုံးရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများတွင် တပ်မတော်အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကို အားလုံးသိအောင် ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ရခြင်း၏ အားနည်းချက်များကို ထောက်ပြခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာငွေတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၀န်ထမ်းများ၏ လစာငွေကိုတိုးပေးခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တစ်ဖက်မှ ကုန်ဈေးနှုန်းများ တက်ခဲ့သည့်အတွက် လစာငွေတိုးပေးခဲ့ခြင်းသည် အရာမထင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ရခြင်းများ၏ အကြောင်းအရင်း များကိုရှာဖွေပြီး အားနည်းချက်များကို ပြုပြင်သွားကြရန် မှာကြားခဲ့ကြောင်း၊ ပထမအချက်အနေနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအပိုင်းတွင် အားနည်းချက်များရှိ၍ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မူဝါဒများချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း လက်အောက်မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် နေရာများတွင် အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိရကြောင်း၊ နောက်တချက်မှာ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုန်သည်များမှ အမြတ်အစွန်း မတရားယူ၍လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းတက်နိုင်ကြောင်းစသည်ဖြင့် သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း။
၅။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း မှာကြားခဲ့ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မဖူလုံသေးကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မလုံလောက်သေးကြောင်း၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် အကျိုးတူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွှေလီရေအားလျှပ်စစ်မှတစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ(၄၅)သန်းခန့် လျှပ်စစ် ပြန်ဝယ်သုံးနေရသည့် အနေအထားရှိကြောင်း၊ ဂက်စ်တာဘိုင်များလည်းရှိပြီး ၄င်းဂက်စ်တာဘိုင်များကို အပြည့်အ၀ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းနေကြောင်း၊ ယနေ့အချိန်တွင် မဂ္ဂါဝပ် (၁၀၀၀) ကျော်ထုတ်ပေးနိုင်သော်လည်း လုံလောက်မှုမရှိသေးသည်ကို တွေ့ ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ရရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို အားလုံးမျှမျှတတဖြစ်အောင် အရေးကြီးသည့် နေရာများသို့ ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးပေးနေကြောင်း၊ နောက်ထပ်စီမံကိန်းများလည်း များစွာရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်မှဘာတွေလုပ်နေသလဲ၊ ဘယ်လောက် ဖြန့်ဖြူးပေးနေသလဲ၊ ဘယ်လိုဖြန့်ဖြူးပေးနေသလဲ ဆိုသည်ကို သိရှိရန်လိုကြောင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိပြီး မိမိနှင့် ဆက်စပ်နေသော လူထုကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြရန်လိုကြောင်း၊ လူထုကိုလည်း မလိမ်ညာရန်လိုသည်ဟု မှာကြားခဲ့ကြောင်း။
၆။ ယခုနိုင်ငံတော် အခြေအနေသည် နိုင်ငံရေးအရ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေးအပိုင်းများသည် အဓိကကျပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်နေကြောင်း၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍစသည့် မိမိကျရာ ကဏ္ဍများ၌ ၎င်းကွင်းဆက်များကို ခိုင်မာအောင်လုပ်ရန်လိုကြောင်း၊ အဓိကအချက်မှာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်နေရန်လိုကြောင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနှင့် စီးပွားရေးပျက်ကပ်များကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရိုက်ခတ်နေသည့်အတွက် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ လည်း ထိုက်သင့်သည့် ရိုက်ခတ်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တည်ငြိမ်သည်ထက်တည်ငြိမ်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ထားရန်လိုကြောင်း၊ ယခုအချိန်သည် အဘက်ဘက်မှ မတည်ငြိမ်အောင်၊ ပြိုကွဲအောင်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက် လုပ်ဆောင်လာနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ကြိုတင်မျှော်တွေးပြီး သတိဖြင့်ကာကွယ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 23:57 )